“မျက်နှာဖုံး လို၏ မလို၏ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “မျက်နှာဖုံး လို၏ မလို၏ “	12
“မျက်နှာဖုံး လို၏ မလို၏ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 16, 2015 in Creative Writing, Poetry | 12 comments
” မျက်နှာဖုံး လုိ၏ မလို၏”
ပြောင် ပြောင် ဆိုမှ
aye.kk says: ပြောင်ပြောင်က
တောင်ပေါ်သား says: ဒို့ ဘဘပြောင်ကို မထိနဲ့ ၊
သူ့ခမျာ နှလုံးမှာ စက်တပ်ထားရတယ်ဆိုလား
ဟဲ ဟဲ စတာနော် ၊ မျက်နှာပြောင်တိုက်သူတွေကတော့ နေရာအနှံ့ပေါ့ဗျာ ၊
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပြောင် ပါတယ်ဆိုမှ ပြောင်ပြောင်ဘဲပေါ့
အပြင်မှာလဲ ပြောင်တဲ့သူ အတော်များများ တွေ့နေရတာ
Courage says: ပြောင်ပြောင်ဆိုမှ ပြောင်ပြောင်ကြီး…. ငင့်… တာဘာမှ ကျောဘူး
Ma Ma says: ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက သော်တာဆွေရေးတဲ့ မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ ရဲရင့်ခြင်းဆိုတဲ့စာကို ဖတ်ပြီး
လက်တွေ့ဘ၀ထဲရောက်တော့မှ မမှန်ကန်ပဲ ရဲရင့်နေကြတာတွေတွေ့တော့….
အဲဒါကြောင့်လည်း မြန်မာစကားပုံမှာ သူခိုးက လူဟစ်လို့ ရှိတာပဲလို့ တွေးမိသွားတယ်။
အရင်က မမှန်ကန်သူက ဘေးမှာ ခပ်ကွယ်ကွယ်လေးနေကြတယ်။
အခုတော့ မမှန်ကန်သူက ထိပ်ရောက်နေတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: .ပြောင်ပြောင်တွေ ရှိနေတဲ့ ပြောင်ပြောင်ပြည်…
lu lu says: မျက်နှာပြောင်တိုက်မှတော့ ပြောင်ပြီပေါ့
Mike says: .မျက်နှာဖုံး ဆိုတာ
မြစပဲရိုး says: တစ်ချို့ အတွက်တော့ ဟိုဘက်တစ်မျိုး ဒီဘက် တစ်ဖုံ လုပ်နိုင်ဖို့ မျက်နှာဖုံး ဆိုတာ အရေးတကြီး ကို လိုသပေါ့ ကပေါက်ကြီး ရာ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မျက်နှာဖုံး တစ်ခုမက အများကြီးဆောင်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်